April 25, 2019 Kyal Sin Lin 1129 Views0Comments poem, Zin Pyi Phyo	min read
April 25, 2019 April 25, 2019 Kyal Sin Lin 683 Views0Comments poem, Zin Hnin Thit	min read
April 24, 2019 April 30, 2019 Kyal Sin Lin 1017 Views0Comments A Bone Khit, poem	min read
April 24, 2019 April 25, 2019 Kyal Sin Lin 761 Views0Comments Ega Moe, poem	min read
May 23, 2018 May 23, 2018 Kyal Sin Lin 1062 Views0Comments Duwan	min read
April 20, 2018 April 23, 2018 Kyal Sin Lin 847 Views0Comments Mask	min read
အပြောင်းအလဲ ဗလောင်းဗလဲတွေကြားမှာ အသုံးချခံနေရတဲ့ ငါဟာ မျက်နှာဖုံးတစ်ခု…. ရောင်စုံပလပ်စတစ် အရုပ်တွေကြားမှာ တွဲလောင်းချိတ်ထားခံရတဲ့ ငါဟာ မျက်နှာဖုံးတစ်ခု…. လှပတဲ့ခေါင်းစဉ်များနဲ့ ရွှေရောင်ဖိတ်စာပေါ်က စကားလုံးတွေကြားမှာ ယစ်မှုးပျော်ရွှင်နေတဲ့ ငါဟာ မျက်နှာဖုံးတစ်ခု…. ဟိုး….တောင်တန်းပေါ်က အရိပ်မဲ့ ရွက်ကြွေတွေနဲ့ ကလေးငယ်တွေ
March 27, 2018 April 7, 2018 Kyal Sin Lin 1585 Views0Comments Kyal Sin Linn	min read
မေ့ပစ်လိုက်ပြီတဲ့ သူနှုတ်ဖျားက ရက်ရက်စက် ထွက်ကျလာတဲ့ မထင်မှတ်တဲ့ နင့် စကားတစ်ခွန်း။ အကြောင်းပြချက်မရှိတဲ့ နယ်နှင်ဒဏ်တစ်ခုလို ရင်တစ်ခုလုံးဗြောင်းဆန်လို့ အံသြခဲ့ရတဲ့ မထင်မှတ်တဲ့ နင့် အချစ်တစ်ခု ။ နင်ချမှတ်တဲ့ မူဘောင်ထဲ အယူခံဝင်ခွင့် မရှိ အာမခံ
March 16, 2018 March 16, 2018 Admin Admin 2982 Views0Comments poem	min read
January 8, 2018 January 17, 2019 Kyal Sin Lin 652 Views0Comments poem, Shwe Tyi Thu	min read
January 5, 2018 January 16, 2019 Kyal Sin Lin 710 Views0Comments Nwe Poem	min read